Wararka - Qaybta birta ee Shiinaha oo caadi ku soo noqonaysa
Shirkadaha la xiriira birta Shiinaha ayaa hagaajinaya meheraddooda iyadoo qiimayaashu caadi ku soo noqonayaan, ka dib markii ay dawladdu ka hortagtay mala-awaalka suuqa ee agabka aadka loogu baahan yahay ee warshadaha.
Iyada oo laga jawaabayo qiimaha bilaha dheer u booday badeecadaha waaweyn sida macdanta birta, qorsheeyaha dhaqaalaha ugu sarreeya ee Shiinaha ayaa Talaadadii ku dhawaaqay qorshe hawleed lagu xoojinayo dib-u-habaynta habka qiimaha inta lagu guda jiro muddada 14-aad ee Qorshaha Shanta Sano (2021-25).
Qorshuhu wuxuu iftiiminayaa baahida loo qabo in si habboon looga jawaabo isbeddelka qiimaha macdanta birta, naxaasta, galleyda iyo badeecadaha kale ee waaweyn.
Waxaa sii waday sii deynta qorshe hawleedka cusub, mustaqbalka rebarku wuxuu hoos u dhacay 0.69 boqolkiiba ilaa 4,919 yuan ($ 767.8) halkii ton Talaadadii. Mustaqbalka macdanta birta ayaa hoos u dhacday 0.05 boqolkiiba ilaa 1,058 yuan, taasoo muujineysa hoos u dhac ku yimid isbeddelka ka dib markii hoos u dhac uu keenay ololaha dowladda.
Qorshaha wax -qabad ee Talaadadii wuxuu qayb ka yahay dadaalladii ugu dambeeyay ee saraakiisha Shiinaha ay ku doonayeen inay ku xakameeyaan waxa ay ugu yeereen mala -awaalka xad -dhaafka ah ee suuqyada badeecadaha, taasoo horseeday khasaare weyn oo soo gaaray badeecadaha warshadaha Isniintii, labadaba Shiinaha iyo dibaddaba.